आठाना फिर्ता- विविधा - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन ३, २०७६ विमल निभा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलले बालुवाटारको आठाना जमिन फिर्ता गरेकै समयमा बालुवाटारमा पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेडहरूका एक तस्बिर सोसल मिडियामा भाइरल बन्यो । त्यसमा वर्तमान अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली तन्मयतापूर्वक मुरली बजाइरहेका छन् भने दुई भूतपूर्व अध्यक्षहरू कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधवकुमार नेपालचाहिँं घनघोर सहयोगी मुद्रामा सारंगी । कुन्नि, अर्का दुई नम्बरका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तस्बिरमा किन नदेखिएका हुन् ! सम्भवतः उनी नेपथ्यमा उपस्थित भएर र्‍याइँ–र्‍याइँ गरिरहेका थिए । जे भए पनि अत्यधिक भाइरल तस्बिरमा भूतपूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष कमरेडहरू प्रशस्त खुसी देखिन्छन् । यिनीहरू मध्ये अध्यक्ष कमरेड ओली अहिलेका प्रधानमन्त्री भएकाले गदगद हुनु स्वाभाविकै छ ।
एक प्रकारले उनी पदेन पुलकितावस्थामा विराजमान छन् । तर अन्य दुई भूतपूर्व अध्यक्ष कमरेडहरूचाहिंँ के कुरामा यति प्रसन्न देखिएका हुन् ? यसमा पनि आठानाको व्यापक भूमिका हुनसक्छ । कुनै बेला कमरेड माधवकुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनालमा तीव्र संघर्ष चलेको थियो । यसलाई पुरानो एमाले पार्टीको इतिहासमा ‘आठानाको संघर्ष’ नामले स्मरण गरिन्छ । दुवै कमरेडहरू एकातिर पञ्चायती व्यवस्थासँग जोडदार लडाइँ गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर आठानाको संघर्ष पनि चालु थियो । यसको कारण राजधानी, काठमाडौंको आठाना थियो । अर्थात् कोटेश्वरस्थित जम्माजम्मी आठाना जमिन । (पढ्नोस्, २०६७ सालको चैत २६ गते प्रकाशित मेरो ‘सिउँडी’) को रचना– आठानाको सिद्धान्त) । हँ, के त्यो वरिष्ठ कमरेडहरूबीच आफैं–आफैंमा भएको आठानाको विवाद मिलिसक्यो ? तर वर्तमान महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलले चाहिँं आफ्नो आठानालाई मिलाउन सकेनन् । अतएव अघि बढेर फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आयो । यहींनेर मेरो मनमा एउटा उत्सुक्ता जन्मिएको छ– केही गरी आफ्नो आठाना फिर्ता गरेका कमरेड महासचिव पौडेलको मन एकाएक परिवर्तित भएर उनले फिर्ता गरेको आठानालाई फिर्ता मागे के हुन्छ ?
कमरेड महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको आठाना फिर्ता गराइको मौलिक स्टाइलले म बहुतै प्रभावित भएको छु । र मलाई पनि केही फिर्ता गरुँ भन्ने लागिरहेको छ । के फिर्ता गरुँ म ? एक मन त आफ्नै घरको जमिन फिर्ता गरुँ भन्ने भयो । तर यो त आठाना जमिनमा छैन । अब एकाध आफ्ना फिर्ता गरेर के हुन्छ ? त्यसमाथि मैले आफ्नो घरको जमिन कुनै भूमाफियाको बरदहस्तबाट प्राप्त गरेको पनि होइन । यो मेरो विशुद्ध परिश्रमको आर्जन हो । मैले महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद जसरी किन फिर्ता गर्ने ? तसर्थ म आफ्नो फिर्ता गर्ने विचारलाई नै अविलम्ब फिर्ता लिन्छु । प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:१५
उपत्यकाका खोला अव्यवस्थित र प्रदूषित छन्, यसको प्रभाव जलचरमा समेत परेको छ
फाल्गुन ३, २०७६ लीला श्रेष्ठ
(भक्तपुर) — साहित्यकार एवं संस्कृतिकर्मी तेजेश्वरबाबु ग्वंगले हनुमन्ते खोलामा पौडी खेल्न सिके । त्यसबेला हनुमन्तेको पानी कञ्चन थियो । ‘त्यस्तो सफा पानी सम्झँदा मात्रै आनन्द लाग्छ,’ उनले सम्झिए, ‘हामी त माछा पनि मार्थ्यौं । अब उपत्यकाको नदी/खोलामा माछा बाँच्ने अवस्थै छैन ।’
उनले भनेजस्तै उपत्यकाका खोला अव्यवस्थितमात्रै होइन प्रदूषित छन् । यसको प्रभाव जलचरमा समेत परेको छ । भक्तपुरको मुख्य सम्पदाका रूपमा रहेको हनुमन्ते खोला अस्तव्यस्त हुनुमा जर्मन प्रोजेक्ट नै कारक रहेको भक्तपुर नगरपालिकाका पर्यटन तथा वातावरण समितिका संयोजक रवीन्द्र ज्याख्वाको तर्क छ । उनका अनुसार नगरमा दुई चरणमा जर्मन प्रोजेक्टले काम थाल्यो ।
पहिलो चरण (२०२७–०३१) मा साना सम्पदा संरक्षण र ढल निकासको काम भयो । दोस्रो चरण (२०३२–४४/४५) मा ‘भक्तपुर विकास परियोजना’ शीर्षकमा घरघरमा शौचालय बने । परियोजनाअन्तर्गत नै पाटीपौवा, सत्तल, बाटो मर्मतलगायतका काम भए । खानेपानी र ढलको पाइप बिछ्याइयो । माथिल्लो भेग (पूर्वी भेग) को ढल भक्तपुर–७ खंचास्थित दुई वटा उपचार पोखरी (प्रशोधन केन्द्र) मा खसाल्न थालियो ।
प्रशोधन गरेपछि मात्र हनुमन्तेमा सफा पानी पठाउने प्रक्रिया थालिएको थियो । पश्चिम भेगबाट बग्ने ढल भक्तपुर–१ सल्लाघारीस्थित चार वटा प्रशोधन केन्द्रमामा प्रशोधन गरी हनुमन्तेमा पानी पठाउन थालिएको ९ नम्बर वडाका अध्यक्षसमेत रहेका ज्याख्वाले भने । तर परियोजनाको यस्तो प्रणाली तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन ।
प्राविधिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीयलाई दिन नसक्दा यस्तो समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।
पोखरीमा जम्मा भएको ढल प्रशोधन भएपछि मात्र नदीमा पठाउनुपर्ने थियो । तर नगरबाट निस्किएको ढल सिधै खोलामा पुर्‍याइयो । ‘नगर त सफा हुँदै गयो, तर हनुमन्ते फोहोर भयो,’ साहित्यकार ग्वंगले भने ।
भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिकामात्र होइन, उपत्यकाको तीनवटै जिल्लाबाट निस्किएको ढल सिधै वाग्मती र यसका सहायक नदीबाट बग्छ । नगर सफाको अवधारणाअनुरूप ढल व्यवस्थापनको नाममा सिधै खोलामा मिसाएपछि नदी दुर्गन्धित बनेका छन् । अहिले पनि नगरपालिकाहरूले बस्तीको ढल व्यवस्थित गर्न ह्युमपाइपमार्फत सिधै खोलामा ढल खसालिरहेका छन् । ‘यसले गर्दा सांस्कृतिक महत्वका नदीनाला दुर्गन्धित भए,’ काठमाडौं–२९ अनामनगरका तुल्सीबहादुर डंगोलले भने, ‘तीन दशकअघिसम्म धोबीखोला सफा थियो, अहिले दुर्गन्धित बन्यो । ढल प्रशोधन नभएसम्म खोला सफा हुँदैन ।’
ढल प्रशोधनको तयारी
वाग्मती र सहायक नदीलाई पुनर्जीवन दिन काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईडी) र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ढल व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिरहेका छन् । आयोजना कार्यान्वयन इकाईअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रबन्धक सुरत बमका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनालक्षित पाँच ठाउँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना छ ।
नेपाल सरकार र एडीबीको सहयोगमा सल्लाघारी, कोड्कु (बालकुमारी), गुह्येश्वरी, धोबीघाट, गोकर्ण, हनुमानघाटमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताए । पीआईडीले हनुमन्ते, मनोहरा र खस्याङखुसुङ नदीको दुवै किनारमा करिब ४४ किलोमिटर ढल प्रणालीको काम गरिरहेको छ । जसमध्ये ३१ किलोमिटर सम्पन्न गरी प्रशोधन केन्द्रसम्म जोडिएको छ । गुह्येश्वरी प्रशोधन केन्द्रबाट दैनिक ३ करोड २४ लाख लिटर फोहर पानी प्रशोधन गरेर वाग्मती नदीमा बगाउने बमले बताए ।
सल्लाघारीबाट दैनिक १ करोड ४२ लाख लिटर प्रशोधन गरी हनुमन्ते नदीमा, कोड्कुबाट दैनिक १ करोड ७५ लाख लिटर मनोहरा नदीमा मिसाइनेछ । धोबीघाटबाट दैनिक ७ करोड ४० लाख लिटर, गोकर्णबाट दैनिक ३० लाख लिटर र हनुमानघाटबाट दैनिक १० लाख लिटर ढल प्रशोधन गरिनेछ । ‘दैनिक १४ करोड २१ लाख लिटर अर्थात् करिब १६ सय लिटर प्रतिसेकेन्ड सफा पानी उपत्यकाका नदीमा बगाउने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘हाल गुह्येश्वरी प्रशोधन केन्द्रबाट दैनिक २ करोड ३० लाख लिटर परीक्षण भइरहेको छ ।’
निर्माण कम्पनीले सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाटको प्रशोधन केन्द्र पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने र गुह्येश्वरीको १० वर्ष सञ्चालनपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ । उपत्यकाको जनसंख्याका हिसाबले ती केन्द्र ढल प्रशोधनका लागि पर्याप्त भने होइनन् । कतिपय स्थानमा जग्गा र खोला विवादका कारण ह्युमपाइप जडान तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा समस्या आएको पीआईडीका प्रबन्धक बम बताउँछन् ।
सरकारले सन् २०२१ सम्ममा दैनिक १४ करोड २१ लाख लिटर ढल प्रशोधन भइसक्ने जनाएको छ । सन् २०१६ देखि सुरु भएको प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागत करिब ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । सन् २०३० सम्ममा उपत्यकाको ५० प्रतिशत फोहोर पानी प्रशोधन गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:१२